Ciidamada Puntland oo howlgalkii ugu ballaarnaa ka wada Gobolka Bari - Awdinle Online
Home News Ciidamada Puntland oo howlgalkii ugu ballaarnaa ka wada Gobolka Bari
Cutubyo ka tirsan Ciidamada PMPF oo ay weheliyaan ciidanka PSF ayaa hawlgallo ka fuliyey Togagga Marajiifle, Gaaca iyo deegaamo kale oo kuteedsan togaggaasi.
Waxay ciidanku sii wadeen hawlgalkooda, iyagoo lug ku maraya Buuraha iyo Togagga raadkoodu kasii nool yahay. Sidoo kale ciidanka ayaa ka hawlgalay Buuraha iyo Togagga deegaanka Laag.
Iyadoo laga duulayo amaawiirta Madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ciidamada PMPF waxay sii wadi doonan hawlgallada lagu sugayo Amniga, laguna soo afmeerayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish ayaa lagu yiri” War kasoo Ciidamada PMPF.
Tan iyo markii Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen Xabsiga Dhexe ee Magaalada Boosaaso ayaa Ciidmada Puntland waxaa ay howlgallo kala duwan ka wadaan degaanada Buuraleyda ah ee u dhow Magaalada Boosaaao, iyaga oo soo furtay Maxaabiis farabadan.
Previous articleGuddiga dowladda Soomaaliya ku matalaya dacdda Badda oo ka dhoofay dalka
Next articleGuddoomiye Filish oo u digay Shacabka Muqdisho